आज जेठ ३१ गते शनिबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
June 13, 2020 1291
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आफ्ना भन्नेहरुले सहयोग गर्ने तथा दाजुभाइहरुको समर्थना राम्रा काम गर्न सकि’नेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिलो हुने समय रहेकोछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामा’नको व्यापारमा म’न्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । साझपख वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि समय अनुसार अपडेट भइनेछ । अध्ययनमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने घर परिवारमा सबैको सल्लाह सुझाव पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) कल्या’णकारी तथा तारिफयोग्ग काम गरि चर्चामा आउन सकिनेछ । धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रमा ध्यान जानेछ । दाजुभाइ तथा जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ । लेखन कलाको माध्ययबाट आ’फ्ना विचारहरु मनमा’नसमा लैजान सकिनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) खर्च बढ्नु’का साथै आर्थिक संकटले सताउन सक्छ । समय र नियमलाई बेवास्ता गर्दा चुनौती आइलाग्नेछन् । दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना छ । छर–छिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ । तापनि, प्रतिस्प’र्धाबाट सामान्य फाइदा उठ्नेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) पढाइ लेखा’इमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले आफन्त तथा अग्रजहरु खुसी रहनेछन् । पारिवारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नि’बिच मायाको डोरो कसिलो हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । साझप’ख वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजाका साथ तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईँकै नाम आउनेछ । मामा तथा मा&&वलि पक्षसँग सम्बन्ध थप सुधार भएर जानेछ । पुरानो समस्या तथा रोगहरु स्वत समाधान हुने योग रहेकोछ । व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) अध्ययनमा मन जानेछ । वपंश बृद्धिको योगलाई नकार्न सकिँदैन ।औषधीज’न्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धित सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकि’नेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) माया प्रेममा सामान्य खटपटको योग रहेकोछ भने जीवनसाथीको असहयोगले कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने योग ‘रहेकोछ । राजनीति तथा समाजसे’वामा प्रशस्त समय खर्चिए पनि उपलब्धि न्युन हुनेछ । समय तथा परिस्थितिको अध्ययन बिना चल्नाले दुख पाइनेछ । व्यापार व्यवसायमा लगा’नी गरे पनि प्रतिफल पाउन निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । साझपख अध्ययनमा मन जानेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । पुराना वि’वादित बिषयहरु हल भएर जानेछन् । नाफा’मुलक व्यवसाय भन्दा सेवामुलक व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । साझपख वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा आत्मियताको बढोत्तरी हुने यो’ग रहेकोछ । प्रेममा रमाउन चाहनेह’रुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) प्रविधिको प्रयोग गरि अध्ययन गर्नाले तपाईँको नाम एक कदम अगाडि आउने’छ भने प्रतिस्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नति’जा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेविहरुले जनताको समर्थनमा पद प्राप्त हुने योग रहेकोछ । प्रेममा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेछ । तरप’नि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) काम गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला दण्ड तथा जरिवाना हुने योग रहेकोछ । स्वास्थ्य’मा समस्या आउने तथा आफन्तहरू टाढिनेछन् । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरस’फाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला । साझपख समय राम्राे रहेकोले अध्ययनमा प्रविधिको सहयोग लिदै निरन्तता दिन सकिनेछ ।
Prevभोलि जेठ ३१ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextकेटि जिस्काउने यि केटाहरुलाई पर्यो यस्तो फसाद (हेर्नुहोस् भिडियो)
पूजा र आकाशको यो भिडियोमा के छ त्यस्तो ? हाल्ने बित्तिकै भयो भाइरल (भिडियो सहित)
पेट्रोल ट्यांकर त्रिशूलीमा खस्याे, पानीमै लाग्याे आगाे! हेर्नुहोस्…
हेर्दा-हेर्दै कोब्राको टाउकोमा सुनौलो रंगको (मणी) प्रकाश चʼम्किन थालेʼपछि… भिडियो हेर्नु’होस
रमेश प्रसाई र कल्पनाको सबैतिर बिहेको चर्चा हुँदा दोहोरीबाटै खोले बिहेको रहस्य (भिडियोसहित )